China Ivermectin futhi Clorsulon Injection 1% + 10% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
I-Clorsulon: 100 mg.
Ivermectin ngeyelicembu le-avermectins (macrocyclic lactones) kanye nekulwa ne-nematode kanye ne-arthropod parasites. IClorsulon iyi-benzenesulphonamide esebenza ngokuyinhloko uma iqhathaniswa nezigaba zabantu abadala ezinesibindi. Kuhlanganisiwe, i-Intermectin Super iletha ukulawula okuhle kakhulu kwangaphakathi nangaphandle kwamagciwane.
Kuboniswa ekwelapheni nasekulawulweni kwama-parasites angaphakathi, kufaka phakathi i-Fasciola hepatica yabantu abadala, nezinambuzane zangaphandle ezinkomeni zenyama nezobisi ngaphandle kwezinkomo ezincelisayo.
Umjovo we-Ivermic C ukhonjisiwe ekwelapheni nasekulawuleni ama-parasites emathunjini, izimuncagazi zamaphaphu, i-Fasciola hepatica yabantu abadala, izibungu zamehlo, i-myiasis enqamulelayo, izibungu ze-psoroptic ne-sarcoptic mange, izintwala ezincelisayo ne-berne, i-ura noma ama-grub.
Ungayisebenzisi ezinkomeni zobisi ezingancelisi kufaka phakathi amathole akhulelwe zingakapheli izinsuku ezingama-60 zizelwe.
Lo mkhiqizo awusetshenziswanga ngemithambo yegazi noma ngemisipha.
Lapho ivermectin ihlangana nenhlabathi, ibopha kalula futhi ngokuqinile emhlabathini futhi ingasebenzi ngokuhamba kwesikhathi. Ivermectin yamahhala ingathinta kabi izinhlanzi nezinye izinto eziphilayo ezizalwa ngamanzi lapho zondla khona.
I-Intermectin Super ingalawulwa ezinkomeni zenyama noma ngasiphi isigaba sokukhulelwa noma sokuncelisa uma ubisi lungahloselwe ukusetshenziswa ngabantu.
Ungavumeli ukugeleza kwamanzi kusuka ezindaweni zokuphakela ukungena emachibini, emifuleni noma emachibini.
Ungangcolisi amanzi ngokufaka isicelo ngqo noma ngokulahla okungafanele iziqukathi zezidakamizwa. Lahla iziqukathi endaweni yokulahla inhlabathi evunyiwe noma ngomlilo.
Okuvamile: 1 ml ngesisindo somzimba esingu-50 kg.
Ngenyama: izinsuku ezingama-35.
Langaphambilini I-Iron Dextran Injection 10%
Olandelayo: I-Kanamycin Sulfate Injection 5%